Nooca Doorashada Soomaaliya Oo Laga Heshiiyay | Gaaroodi News
Waxaa lasoo gabagabeeyay shir dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka uga socday magaalada Muqdisho halkaas oo maalmihii lasoo dhaafay ay ku shirsanaayeen.
Waxaana lagu heshiiyay qaabka loo qabanayo doorasho xilligeeda ku dhacdo kaddib shir shan maalmood madaxda labada dhinac uga socday Muqdisho.
Heshiiskan ayaa imaanaya kaddib kulamo horey uga dhacay Dhuusamareeb oo saddex ahaa kuwaas oo aanay kasoo bixin wax loo dhan yahay oo ku saabsan arrimaha doorashada.
“Shirkan Muqdisho wuxuu dhameystir u yahay heshiiskii Dhuusamareeb 3” ayaa lagu yiri war murtiyeedka.
Waxaana lagu heshiiyay qodobadan soo socda:
Shirku waxa uu ku bogaadinaayaa Beesha Caalamka kaalinta muuqata ee ay ka geysaneyso dib u dhiska iyo horumarinta dowladnimada Soomaaliya